Ireo mpamatsy madinidinika sy ireo goavana mpanome baiko: manaiky ny filàna fampihavanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Febroary 2020 13:27 GMT
Fa araka ny vaovao farany azo, dia gidraka foana, tsy mitsahatra ny miharatsy ny fepotoana fandoavana ny vola. Araka ny fanadihadiana iray nataon'ny Altares — Dun& Bradstreet, natao tamin'ny 2013, dia 30,6 % monja amin'ireo orinasa frantsay no nanefa ny volan'ireo mpamatsy azy tamin'ny andro nifanarahana, raha 32,3 % kosa izany herintaona talohan'io.
« Tato anatin'ny roa taona, hita nirongatra ny ady tsy misy fotony foronin'ireo tompon-trosa mikasa ny handingana ny lalàna LME », hoy ny fanazavàn'i Denis Le Bossé, filohan'ny ARC, kabinetra mpitaky trosa. Napetrak'io lalàna io, efa tamin'ny 2008, ny fetra 30 andro ho fandoavana amboniny (azo ampiharina raha tsy nisy fifanarahana hafa nifamatorana) ary fetra roa fara-fahelany 45 andro faran'ny volana sy 60 andro feno. Raha tamin'ny voalohany io lalàna io nahafahana nampihena be ny fepotoana fandoavana ny vola, ireo ratsy fanefàna trosa kosa nahita fomba hialàna aminy ary dia kofona teo ity hetsika fampihenàna ity.
Ireo orinasa toy ny Sodexo France, nanasonia ilay sata, dia mampiroborobo ny fiarahana miasa amin'ireo mpianto-draharaha madinika, tsy mametraka mialoha ny tahan'ny fiankinandoha. Tamin'ny 2010, mpanao asatànana sy PME ny 1200 tamin'ireo 1900 mpamatsy nifampiraharahan'ny Sodexo France. Ho an'i Pascal Jeanson, tale miandraikitra ny fividianana sakafo ao amin'ilay vondrona trano fisakafoanana, « mba hakàna tombony amin'ny fihetsehana ara-potoana sy hampihenàna ny sandan'ny fitsinjaràna ato aminay, omenay tombony ny fanangonana entana eny amin'ireo mpamatsy akaiky anay ». « Napetrakay ho 25% ny tahan'ny fiankinandoha ara-toekarena mba hisorohana izay rehetra mety ho fahatapahana tampoka eo amin'ny tsena, hanimba ny fandraharahànay sy ireo mpiray antoka aminay. Natao rahateo mba hiantohana ny tsenanay ihany koa no anomezanay tombony ny fiarahana miasa amin'ireo fikambanana nasiônalin'ny PME », hoy izy nanamafy.
« Ny kinendry mahazatra amin'ny tolobidy toy itony, dia ireo orinasa vaventy », hoy i Mathias Povse, talem-paritry ny ERDF, “Fepetra ao anatin'ilay tolobidy ny fahaizana sady mandefa antso an-telefaonina, mangataka fotoana hihaonana, mametaka ilay fitaovana”, hoy i Marie Hennique manazava, tomponandraikitry ny fampiroboroboana ara-barotra ao anivon'ny CCI Avaratr'i Frantsa. Sehatra fihariana tsy voatery hisy fahazarana hiaraka hiasa hatrany ireo. Natao izay hihaonan-dry zareo. Ary i Mathias Povse no mamintina fa : “Eo io fiarahana miasa io mba hilaza amin'ireo PME tsy hanao ny habeny ho hisatra, na ny haben'ny tsena”.